Awutaar- appilikeeshinii haaraa gurgurtaa muuziqaaf qophaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Awutaar- appilikeeshinii haaraa gurgurtaa muuziqaaf qophaa'e
Industirii muuziqaa Itoophiyaa keessatti rakkoolee jiraan keessaa tokko teeknooloojiidha. Duraan muuziqaan shakilaadhaan kan ture gara kaaseettii, takka turee immoo gara CD yeroon booda immoo 'softcopy'n gurguramuu jalqabe.
Yeroo baay'ee artiistota buleeyyiis ta'e reefu gara muuziqaa dhufanitti hojii isaanii guutuudhaan gara uummataa bahuuf rakkoo kan itti ta'aa ture hojii isaaniirra mallaqa argachuu qaban argachuu dhabuu isaaniiti.
Qindeessaa muuziqaa kan ta'e Eliyaas Malkaa hojiin artiistoota hedduu hojjatamee dhume akka isa bira jiru ragaa baha.
Inistitiyuutiin Aartii Oromiyaa maal milkeessuuf kaayyeeffate?
Hojiilee aartii warraaqsa Sudaan si'eessan
Akka Eliyaas jedhutti hojiin aartii gama CD'n hojjatamuu dhabuu hojii muuziqaarratti dhiibaa guddaa akka qaba.
Pireezidaantiin Waldaa Muuziqeessitoota Itoophiyaa kan ta'an obbo Daawit Yifiruus yaada Eliyaas ni deeggaru.
Artiistoonni al tokko gatii hojii isaanii ittiin gurguraan murteessanii gurguru. Achii boodas hammam akka baase quba hin qaban jechuun dubbatu.
Amma amma karaan muuziqaan uummata bira gahu jijjjiiramaa jira. Kanaafi kan amma manni maxxansaa muuziqaa hin jirreef jedhu obbo Daawit.
Weellistoonni amma mallaqa liqeeffataniis ta'e sirba qeenxe tokko ni baasu. Ergasii booda waltajjii tokko tokkorratti ni weellisaa boodaarratti yoo danda'e biyya alatti deeme weellise bu'aa bayiif of saaxila.
Kanaafuu maal wayya?
Eliyaas Malkaa adaduma teeknooloojiin jijjiirama deemuun industiriin muuziqaas akkasuma waliin jijjiiramuu qaba jedhee waan yaadef waan tokko hojjachuun akka isaarra jiru murteesse.
Pireezidaantii Waldaa Muuziqeessitoota Obbo Daawit Yifiruufi ogeessota aartii kaan waliin ta'uudhaan appilikeeshiinii tokko hojiirra oolchuuf murteessan. Hojichis waggoota shan itti fudhatee jira.
Boodarraatis ogeeyyiin kunneen Itiyoo Telekoom waliin ta'uun appilikeeshinii gurgurtaa muuziqaafi maarsariitii Awutaar jedhamu kan gaafa Caamsaa 23, 2011 hojii jalqaba jedhame ifa godhaniiru.
Appilikeeshiniin kun namoonni bakkaafi yeroo barbaadanitti intarneetii fayyadamuun muuziqaa barbaadan argachuu danda'uu jedha Eliyaas Malkaa.
Namoonni akka Eliyaas Malkaa, Joonii Raaga, Daawit Nigusuufi Haayilee Ruut fa'aan kan hundeeffame Awutaar Itiyoo Telekoom waliin ta'uuni.
Weellistuun Tsadaniyaa G/maarqos namoota appilikeeshinii kana jajjabeessan keessaa ishee tokko. Bakka intarneetiin gahan jirutti hojiiwwan muuziqaa baay'ee gurguruun ni danda'ama jetti.
Jireenyi namoota guddina teeknooloojii waliin bakka guddataa jirutti tooftan gurgurtaa akkanaa jiraachuun carraa gariidha jechuun dubbatti.
Tsadaniyaan hamma ammaatti hojii ishee karaa Awutaariin naa haa gurguramu jette kan kennite qabaachuu baatus appilikeeshinichi hojii yoo jalqabe garuu duubaatti akka hin deebine himti.
Kunis akka namoonni muuziqaa isaan barbaadan qofa bitachuu carraa qabaatu jechuun yaada ishee cimsiti.
Image copyright Awutar Multimedia
Appilikeeshiniin kun weelluu bara 1960 moota keessaa hamma ammaatti hojjataman kan of keessatti qabatudha jedhameera.
Gurgurtaa kanarraa weellistoonni, wallaleessitoonni, Qindeesitoonnifi Barseesitoonni akka irraa fayyadaman nin godhama.
Amma dura weellistoonni shan hojiin isaanii appilikeeshinii kanaan akka gurguramuuf kennaniiru.
Haala kanaanis namoonni biyyaa keessa jiran kan moobayilii Ismaartii fayyadaman kamuu tajaajila kana argachuu danda'u.
Tajaajila Awutaar kennu maal fa'a?
Appilikeeshinichi suuraalee, seenaa weellisichaafi weellistoota biroo akkasumas walaloo sirbicha akka of keessaatti qabate Eliyaas ni dubbata.
Appilikeeshiniin kun kan jalqabaa akka ta'e kan himan obbo Daawit weelluwwan namoonni bitan karaa seeraan alaa namoota biroof akka dabarsanii hin kennineefis sirna to'annaa akka qabu dubbattu.
Weelluun tokko birri afuriifi saantima shantama akka kaffalsiichu Eliyaas ni dubbata.
Appilikeeshinichi Afaan Oromoo, Afaan Amaaraa, Tigiriffaafi Afaan Ingiliiziitiin tajaajila ni kenna. Akkasumas faaruuwwan, manzumaafi welluuwwaan amantii garagaraas ni qaba.
'Jaalala nuuf haa kennu' - Yaaddessaa Booji'aa
Appilikeeshinichi weelluuwwan akkaata bara hojjatamaniin, afaaniifi rukkutaa isaaniitiin qoqqodamanii akka jiraan ibsa.
Weelluwwan baay'een ammaaf baay'inaan biyyaa keessatti kan argaman yoo ta'u, appilikeeshinichis yeroodhaaf biyya keessatti qofa akka hojjatu Eliyaas dabalatan ibsee jira.
Namoonni biyyaan ala jiranis tajaajilicha akka argataniif baankii waliin walii galteerra akka jiran Eliyaas ibseera.
Yeroo appilikeeshinichi Jimaata galgala hojii jalqabu sa'aatii 24 banaadha. Torbaanitti guyyaa torbaa kan hojjattudha.
Hojiiwwan arstistoota lubbuun hin jirree karaa bakka bu'oota isaaniitiin argachuuf walii galatee xumurree jira.
Suuraan: Hojiilee aartii warraaqsa Sudaan si'eessan
4 Caamsa 2019
Aartii: 'Jaalala nuuf haa kennu' - Yaaddessaa Booji'aa